Xiriirka cusub ee Soomaaliya & Eritrea : rejo & cabsi – Kalfadhi
Xiriirka cusub ee Soomaaliya & Eritrea : rejo & cabsi
Booqashada madaxweyne Farmaajo ee dalka Eritrea ayaa laga muujiyey guulo iyo rejo wayn oo usoo hoyatay labada shacab iyo labada dawladood. Sidoo kale cabsi ayaa laga muujiyay isbedellada gobalka iyo dawrka madaxda Eritrea.
Haddaba qormadaan kooban waxaan is barbar-dhigeynaa rejada iyo cabsida:
Soomaaliya & Eritrea waxaa ka dhaxeeyay xiriir sokeeye muddo ka badan 1000 sano kaas oo ku salaysnaa deegaanka Geeska Afrika, soo gelitaankii Diinta Islaamka ee Geeska Afirika, dagaalladii dhex maray muslimiinta Geeska Afrika iyo Kirishtaanka, dawladihii Islaamka ee Geeska Afrika soo maray, boqortooyadii Islaamka ee Turkiga ee Geeska Afrika, gumeystihii Talyaaniga ee wada qabsaday Soomaaliya iyo Eritrea ciidamadoodina is ku beddelay iyo halgankii xornima doonka labada shacab iyo hiilladii ay isa siiyeen iyo abaalka ay isku leeyihiin.
Eritrea waxa ay xor tahay 25 sano kaliya, halka Soomaaliya ay xor tahay 58 sano lkn intii ay Eritrea xorta aheed Soomaaliya waxa ay ku jirtay dawlad la’aan, dagaal sokeeye iyo taag darri awoodeed, halka Eritrea-na ay ku jirtay dagaal deriskeeda Ethiopia iyo go’doomin beesha caalamka gaar ahaan Afrika iyo IGAD.
Kulankaan labada madaxweyne waa kii ugu horreeyey ee dhexmara labada dawladood iyo labada madaxwayne oo rasmi ah kaddib xorriyadii labada dal, rajada laga filan karo ayaa ah:
In si wada jir ah looga qeyb-qaato is bedellada siyaasadeed, amni, dhaqaale iyo bulsho ee gobalka ka socda.
In la heshiisiiyo Jabuuti iyo Eritrea, kaalin-na ay ka qaataan M.Farmaajo iyo RW Abiy Ahmed.
In Mandiqadda ( gobolka Geeska Afrika ) lagu soo dabbaalo nabad iyo xasillooni, loona horseedo horumar dhaqaale iyo mid bulsho.
In Eritrea lagu soo celiyo IGAD, Afrika iyo beesha caalamka, lagana saaro go’doominta iyo faquuqa.
In la xiro xarumaha iyo Saldhigyada Jabhadaha iyo mucaaradka Soomaaliya, Ethiopia, Jabuuti iyo Sudan ee dalka Eritrea.
In la isla fahmo qaabka loola dhaqmayo Quwadaha waawayn ee ku loolamaya Geeska Afrika gaar ahaan America iyo China.
In la isla fahmo khilaafka ka dhexeeya Carabta iyo faragelinta ay ku hayaan Geeska Afrika iyo dhibaatada ka socota Yemen iyo saamaynta ay ku leedahay Geeska iyo sida ay ugu fashilmeen dawladaha Carabtu gaar ahaan Khaliijka.
In dawlad kasta ay aqoonsato Siyaadada iyo Jiritaanka dawlada kale isna wada ixtiraamaan dawladaha Geeska Afrika.
Arrimaha cabsida laga qabo waxaa ka mid ah :
In madaxda Eritrea ay is xigsiiyaan ama si gaar ah ugu dhawaadaan Ethiopia. Soomaaliya iyo Jabuutina gaar u riixaan.
In Eritrea ay Israel fursad u siiso in ay soo dhex gasho soona fara geliso arrimaha Geeska Afika, maadaama ay saldhig ku leedahay Eritrea.
In Jabhadihii ay Eritrea hoyga u aheed kusoo fidaan Somaaliya haddii xarumaha laga xiro culaysna ku noqdaan sidii dhacday 1988-dii markii M. Siyaad Barre iyo Mingiste heshiiyeen.
In Afawerk iyo Abiy Ahmed u weecdaan ama u bataan dhinaca Emaaraatka, Soomaaliya iyo Jabuuti-na culeys ku saaraan in ay lumiyaan dhex-dhexaadnimadii khilaafka Khaliijka.
In M. Afawerk laga bedeli- waayo dhaqanka Jabhadnimada, lana qabsan-waayo Siyaasadaha fur-furnaanta iyo dhaqaala abuurka Geeska Afrika ka socda.
Haddaba waxaa soo dhaweyn iyo taxadar mudan xiriirka cusub ee u billawday Soomaaliya iyo Eritrea.
Wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya.
Guddoomiye Baashe: Doorashada Golaha Wakiillada Waxey Dhaceysaa Billaawga 2019-Ka